EXCLUSIVE : बैंकर्स संघ फुटाउने तयारी, आन्तरिक छलफल हुँदै, ज्ञानेन्द्र ढुंगाना 'ज्ञानेन्द्र शाह' हुन खोजेको आरोप !
ARCHIVE, SPECIAL » EXCLUSIVE : बैंकर्स संघ फुटाउने तयारी, आन्तरिक छलफल हुँदै, ज्ञानेन्द्र ढुंगाना 'ज्ञानेन्द्र शाह' हुन खोजेको आरोप !
काठमाडौँ- प्रतिष्ठित संस्थामध्येको एक नेपाल बैंकर्स एसोसीएसन फुटको संघारमा पुगेको छ । खुला बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्त विपरित ब्याजदरमा कार्टेलिङ गरेर आफ्नो स्वार्थपूर्तिमा लाग्दै संघका अध्यक्ष ढुंगानाले भिलेन रोल खेलेको भन्दै केहि बैंकहरु उक्त संघबाट बाहिरिने भएका हुन् ।
'संघको निर्णय भएकाले हामी केहि पनि बोलेनौं । बहुमत एनआइसी एसिया बैंकमाथि एक्सन लिने नै थियो । तर यो गलत काम हो । आज नेपाल बंगलादेश बैंकको सीइओ संघको अध्यक्ष भएर एनआइसी एसियाविरुद्ध लाग्ने अनि भोलि एनआइसी एसिया बैंकको सीइओ संघको अध्यक्ष भएर नेपाल बंगलादेश बैंक विरुद्ध लाग्ने काम राम्रो होइन ।' एक वाणिज्य बैंकका सीइओले अर्थ सरोकार डटकमसँग भने, 'ढुंगानाकै कारण संघ फुट्ने भयो । यो तीतो अनुभव भएपनि हामीसँग यसको विकल्प छैन ।' उनले भने ।
'एनआइसी एसियाले जे गर्यो, सत्य गर्यो भन्न खोज्नुभएको हो ?' भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले भने, 'के सत्य के गलत भन्ने संघमा छलफल नै भएन । ढुंगानालाई एनआइसी एसियालाई बदनाम गराउन पाए वा अरुले समर्थन नगर्ने बनाउन पाए त्यसको प्रतिफल आफुलाई राम्रो हुन्थ्यो भन्ने छ । त्यसैले उक्त संघको औचित्यता अव छैन। ' हामी नयाँ संघको गठनको तयारीमा छौं ।' उनले भने ।